प्रतिप्रश्न : पत्रकारिता तिखार्ने औजार- विविधा - कान्तिपुर समाचार
हीरक वर्ष खोतल–खातल
राजा महेन्द्रले २०२१ वैशाख २६ गते विश्व रेडक्रस दिवसको उपलक्ष्यमा रेडक्रस नेपालको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा गएर रक्तदान गरे ।
जेष्ठ ३१, २०७५ भैरव रिसाल
काठमाडौँ — पसिना बेचेर मात्र भरियाहरूको जीविकोपार्जन हुँदैनथ्यो । त्यसैले पहाडी मूलका २५–६५ वर्षका १८/२० जना भरियाको जमघट भइरहन्थ्यो, वीर अस्पतालको रगत उपलव्ध गराउने एकाइको अगाडिको सडकमा, सडकको पेटीमा । त्यति धेरै भरिया किन त भन्दा रगत चाहिने कुन रक्तार्थीलाई कुन समूहको रगत हो, ठेगान नहुने हुँदा त्यो हुल जम्मा भएको हो ।
सुरु–सुरुमा एक युनिट (मात्रा) रगत दिने भरियालाई १ सय रुपैयाँ दिने गरिन्थ्यो । त्यो पैसो भरियाका लागि प्रशस्त ठानिन्थ्यो । सय कमाउन दिनभर भारी बोक्दा पनि मुस्किल पथ्र्यो । फेरि बोक्न भारी पनि त पाउनुपर्‍यो नि । एकछिन एक युनिट रगत दियो, सय रुपैयाँको नयाँ नोट गोजीमा । एकाध वर्षपछि रक्तदाताहरूको बित्पातै शोषण भो भन्ने परेछ– परोपकार, रेडक्रस जस्ता संस्थालाई बेठिक लागेछ क्यार र २५ रुपैयाँ बढुवा भएछ, त्यो पनि नमागिकनै । रक्तदाता भरियाको भाग्यै खुल्यो भन्न थालेछन् । त्यो परिस्थितिमा रगत बेच्नेहरूबीच तँछाड–मछाड हुने कहिलेकाहीं त † केही वर्षसम्म नै चल्यो, रगत बेच्ने यस्तो दयनीय प्रतिस्पर्धा । लगातार धेरैपल्ट रगत दिँदा स्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकूलताबारे सोच्ने सोच नै टुसाएको थिएन, समकालीन समाजमा, समुदायमा । त्यसको कस्तो परिणाम भयो होला ? हेरिएन ।
नेपालमा रक्तदानको इतिहास थालनी भएको धेरै भयो भनौं या धेरै भएको छैन भनौं जे भने पनि ७५ वर्ष लाग्यो । नेपालका पहिलो रक्तदाता हुन्– अदम्य साहसी एवं उत्साही, प्रचण्ड समाजसेवी दयावीरसिंह कंसाकार । उनले नेपालमा जुद्धशमशेर राणा श्री ३ महाराज रहेका बेला पहिलोपल्ट रक्तदान गरेका रहेछन् । दयावीर आफ्नो नातेदार अस्पताल भर्ना भएकोले भेट्न गएका रहेछन् । त्यतिबेला एउटी महिला बिरामीनिर बसेर रोइरहेकी । दयावीरले किन रोएको भनी सोध्दा उनको बिरामी छोरालाई रगत दिनुपर्छ, नत्र बचाउन सकिँंदैन भनी डाक्टरले भनेपछि रोएकी रहिछन् । जल्दोबल्दो हृष्टपुष्ट खाइहाल्दो युवा दयावीरले रगत दिन्छन् कि भनी रोएकी रे । दयावीरले ‘आफ्नो छोरालाई आफै दिनोस् नत रगत’ भन्दा ‘म मरेंँ भने नि रगत झिक्दा’ भनिछन् । दयावीरलाई दया लागेछ र रगत दिन तयार भएछन् ।
अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. देवव्रत दास गुप्ताले दयावीरको रगत झिकी बिरामी रत्नकाजी तुलाधरलाई दिएछन् । तै रगतको समूह मिलेछ । त्यतिबेला नेपालीहरूमा रक्तदानबारे थाहै थिएन । विहा भएको मात्र होइन, छोराछोरी समेत भइसकेका दयावीरले परिवारको परवाहै नगरी रक्तदान गरेका थिए । उनले बाँचुन्जेल ८ पल्ट रक्तदान गरे । २००४ सालमा दयावीरकै अग्रसरतामा परोपकार संस्था सरकारबाट खड्ग निसानाद्वारा अनुमति प्राप्त भएपछि रक्तदाता स्वयंसेवकहरू टोली नै बनाइएछ । त्यसपछि रक्तदानको स्थिति बस्न थालेको हो । कस्तो थियो होला, त्यस युगमा रक्तदाताहरूको मनोविज्ञान र रगत लिने बिरामी र उनका परिवारको मनोविज्ञान ।
मैले पनि रक्तदान गरेंँ
म रासस (राष्ट्रिय समाचार समिति) को प्रमुख संवाददाता थिएँ । समाचार संकलनका निम्ति समारोहहरूमा गइरहनुपर्ने । रक्तदान नगरिकन त्यस्ता कामको रिपोर्टिङ गर्न जान अप्ठेरो लाग्यो । राससका साथीहरूसँग सल्लाह गरेँ, रक्तदान दिन । १३ जना पत्रकार तयार भयौं । तर १३ जनामध्ये ५ जना अयोग्य ठहरिए । बाँकी ८ जनाले रक्तदान गर्‍यौं । त्यो बेलासम्म पनि रक्तदाताले रेडक्रसमा नै गएर रगत दिनुपर्ने अवस्था थियो । हामीले रक्तदान गरेको २०३४ भदौ ७ गते हो । मेरो रगत ‘ए पोजेटिभ’ रहेछ । मैले ५०० सीसी रगत दिएको रहेछु । त्यतिबेला रक्तदातालाई नेपाल रेडक्रस सोसाइटीकी अध्यक्ष श्री ५ अधिराजकुमारी प्रिन्सेप शाहले दस्तखत गरेको प्रशंसा पत्र दिइँदो रहेछ । मेरो प्रशंसा पत्रमा २५ नं. लेखिएको छ । त्यो २५ नं. केका आधारमा लेखिएको अहिले पनि बुझिन । आर.एच. प्लस भीई (पोजिटिभ) लेखिएको छ । त्यसरी आफूले पनि रक्तदान गरेपछि आफ्नो मनोबल र नैतिकबल पनि बढ्यो । ग्लानि र हीनताबोध त कता हरायो कता । त्यसपछि रक्तदान गर्नुहोस् भन्ने मेरो बोली ठूलो र दरिलो बन्न लाग्यो । दानको परिणाम स्वत: सबल आधार हुनेरहेछ । मेरो निजी अनुभव हो ।
राजा महेन्द्रले पनि गरे रक्तदान
राजा महेन्द्रलाई पनि रक्तदान गर्न मन लागेछ । २०२१ वैशाख २६ गते विश्व रेडक्रस दिवसको उपलक्ष्यमा रेडक्रस नेपालको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा गएर रक्तदान गरे । त्यो रिपोर्टिङ गर्न राससबाट म गएको थिएँ । त्यो आजभन्दा ५४ वर्ष पहिलेको कुरा हो । त्यतिबेला रगत दान गर्नु सरल मानिँदैनथ्यो । जनतामा स्वास्थ्य चेतना पनि निकै कम थियो । रेडक्रसको कार्यालय नेपाल रेडक्रसका अगुवा रमेश शर्माको घरमा त्रिपुरेश्वरमा थियो । ब्लड बैंक पनि शिशु अवस्थामै थियो । अहिले रक्तदान गर्न ब्लड बैंक पुग्नु पर्दैन ।
रेडक्रसको ब्लड बैंकबाट सम्बन्धित विज्ञ सहितको टाली नै आउँछ– टोल–टोलमा, गाउँ–गाउँमा । तर २०२१ सालमा रक्तदान गर्न स्वयं राजा महेन्द्र पनि नेपाल रेडक्रस कार्यालय जानुपरेको थियो । दरबारमा गएर रगत लिनु सहज थिएन । राजा महेन्द्रको रगत प्रत्यारोपण गर्न एकजना व्यापारी रतिरामले इच्छा गरेछन् । तर गु्रप मिलेनछ र वीर अस्पतालमा उपचार गराइरहेकी ३० वर्षीया साधारण महिला शान्ति प्रधानलाई वैशाख २९ गते त्यो रगत दिएछन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७५ ०७:५३